Mucaaradka Itoobiya oo magaalo muhiim ah qabsaday dad Muslimiin ahna Xasuuqay.
Monday November 22, 2021 - 12:48:07
Kooxaha mucaaradka Itoobiya ayaa guulo waaweyn markale kasoo hooyay dagaalka ay kula jiraan melleteriga Federaaliga saacado kadib markii ay fashilmeen isku dayadii lagu doonayay in dhinacyada xabad joojin lagu dahx dhigo.
Wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in fallaagada Tigreega iyo kuwa Oromada ay si buuxda ula wareegeen laba magaalo oo muhiim ah islamarkaana ay dhabarka ka jebiyeen ciidamadii Abiy Axmed.
sida ay wararku sheegayaan habeen hore ayay ciidamada mucaaradka lawareegeen magalada Shwarobit oo katirsan gobolka Showa ee dhacda xuduudda ay wadaagaan Amxaarada iyo Oromada.
Melleteriga Federaaliga xabashida oo lagu wiiqay dagaalladii socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa dib ugu gurtay dhanka wadada aadda Addis Ababa, ilo wareedyo ayaa sheegaya in Tigreegu markii ay magaalada qabsanayeen ay xasuuq ugeysteen dad muslimiin sacboolay ah.
Saxafi Cafari ah oo aad udabagala dagaallada ka socda itoobiya ayaa xaqiijiyay in TPLF ay dishay illaa 10 ruux oo katirsanaa jamaacada dacawiga Tabliiqa muslimiinta ah.
kooxaha mucaaraka Tigreega ayaa magaalo walba oo ay qabsadaan waxay ku xasuuqaan musliminta aqaliyadda ku ah arrinkaas oo banaanka soo dhigaya cadaawadda ay uqabaan muslimiinta mandiqadda, horay sidaan oo kale ayay dad muslimiin ah ugusoo laabeen gobollada amhara iyo cafar iyagoona gubay masaajid.
Qbsashada magaalada Shwarobitt waxay sahali doontaa in ay udhaqaaqaan dhanka magaalada muhiimka ah ee Debre Berhan taas oo qalqalin gelinteeda oo kaliya ay halis ku tahay xukunka Addis Ababa.